टिचिङ अस्पतालका आवासीय र इन्टर्न चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा बिरामी जाँच्दै (फाेटाे/ भिडियाे) – Nepal Journal
टिचिङ अस्पतालका आवासीय र इन्टर्न चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा बिरामी जाँच्दै (फाेटाे/ भिडियाे)
Posted By: Nepal Journal July 13, 2018 | २९ असार २०७५, शुक्रबार १३:४७
काठमाडाैं । पछिल्लाे १४ दिन देखि जुम्लामा अामरण अनशनरत डा. गाेविन्द केसीकाे समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएका छन् । टिचिङ अस्पतालकाे अाेपीइडी बन्द गराएका डाक्टरहरू माइतीघर मण्डलामा बिरामी जाँच्दै छन्। प्राध्यापक केसीकाे माग सम्बाेधन गर्नुकाे साटाे सरकार झनझन प्रतिकात्मक बनेकाे भन्दै अस्पतालका आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न डाक्टरहरुले माइतीघर मण्डलामा ओपिडी सेवा सुरू गरेका हुन् ।
पछिल्लाे १४ दिन देखि जुम्लामा अामरण अनशनरत डा. गाेविन्द केसीकाे समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएका छन् । टिचिङ अस्पतालकाे अाेपीइडी बन्द गराएका डाक्टरहरू माइतीघर मण्डलामा बिरामी जाँच्दै छन्। प्राध्यापक केसीकाे माग सम्बाेधन गर्नुकाे साटाे सरकार झनझन प्रतिकात्मक बनेकाे भन्दै अस्पतालका आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न डाक्टरहरुले माइतीघर मण्डलामा ओपिडी सेवा सुरू गरेका हुन् ।
Be the first to comment on "टिचिङ अस्पतालका आवासीय र इन्टर्न चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा बिरामी जाँच्दै (फाेटाे/ भिडियाे)"